विना भट्टराई | फागुन २९, २०७६ बिहिबार | 0
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वभर महामारीको रुप लिएको छ। अहिलेसम्म विश्वका १२४ देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने मात्रै पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर ३ सय ३७ जनाको ज्यान गएको छ। विश्वका १ सय २४ देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट यो सामाग्री तयार पार्दासम्म १ लाख २६ हजार २ सय ७३ जना संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ७ हजार ३ सय २५ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्।
कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म ४ हजार ६ सय ३३ जनाको ज्यान गइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई विश्व महामारी घोषणा गरिसकेको छ। विश्वभर महामारीको रुप ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सबै देशले सम्पूर्ण शक्तिको अवलम्वन गरेका छन्। तर नेपालमा भने भगवान भरोसा मात्रै देखिएको छ।
विश्वभर कोरोना भाइरसको खतरा मडारिरहेको बेला नेपाल सरकारले कडा कदम चाल्न सकेको छैन्। नेपालमा व्यापक रुपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएकाले आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिती छैन् भनेर जनतालाई सान्त्वना दिनुभन्दा कठोर कदम चाल्न जरुरी छ। विश्वस्वास्थ्य संगठनले विश्व महामारीको घोषणा गरिसक्दा पनि नेपाल चुप लागेर बस्नु भनेको मृत्यु कुर्नु जस्तै हो।
विश्वभर कोरोनाको महामारी फैलिरहेका बेला नेपालमा विदेशी पर्यटकलाई थर्मल स्क्यानको भरमा ज्वोरो नापेर मात्रै कोरोना भएको छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन्। मृत्यु कुर्नु भन्दा कडा कदम चालेर नेपाली जनताको रक्षामा उत्रिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो।
हरेक संकट चुनौती पूर्ण हुन्छन् । तर ती संकटले सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउने अवसर पनि प्रदान गरेको हुन्छ। अहिले कोरोना भाइरस विश्वमा संकट बनेर आएको छ। यो संकटलाई नियन्त्रण गर्न सके नेपाल सरकार सफल र सक्षम कहलाउने छ। जनताले भरोसा गर्ने सरकार बन्नेछ। त्यसैले यो सरकारका लागि अग्नी परीक्षा जस्तै हो। आफ्नो अग्नी परीक्षा पास गर्नका लागि सरकारले कुनै पनि कसर छोड्न हुँदैन्। जनताको भरोसा र विश्वास बनाइराख्न जरुरी छ।
विश्वस्वास्थ्य संगठनले विश्व महामारीको घोषणा गर्दा यसबाट नेपाल सुरक्षित पक्कै हुन सक्दैनन्। त्यसैले हरेक नेपालीको सुरक्षा र रक्षाका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय सावधानी अप्नाउनु नै हो। अहिलै आपतकालिन निर्णय गरेर यसको रोकथामका लागि खरो रुपमा नउत्रिए नेपालमा यसको संकट अनाउला भन्न सकिदैन्।
स्कुल कलेज बन्द
अहिलेको समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न स्कुल कलेज केही समयका लागि बन्द गराउन आवश्यक छ। स्कुल तथा कलेजमा बढी भिडभाड हुने तथा एक अर्कासँग सजिलै सम्पर्क रहने भएका कारण स्कुल तथा कजेलबाट कोरोना भाइरस फैलिने उच्च सम्भावना रहन्छ।
हतार हतार परीक्षा गराएर चैत ५ कुर्नु भन्दा तत्कालको परीक्षा स्थगित गरेर स्कुल कलेज बन्द गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। कोरोना भाइरसको त्रासमा विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराएर चैत ५ गर्नु भनेको मृत्यु पर्खिनु जस्तै हो। सरकारले छिटो भन्दा छिटो यस तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। एकातिर कोरोनाको त्रास र अर्को तिर परीक्षाको भार विद्यार्थीका लागि आफैमा चुनौर्तीपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले हतार हतार परीक्षा सञ्चालन गराउन खोज्नु विद्यार्थीको शारिरीक, मानसिक तथा संवेगात्मकतामाथि खेलवाड गर्नु हो।
अन्य देशले पनि कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै स्कुल, कजेल बन्द गराएका छन्। अहिलेको अवस्थामा नेपालले पनि ती देशबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। विद्यार्थीलाई मृत्युको मुखमा धकेल्नुभन्दा स्कुल, कलेज बन्द गराएर विद्यार्थीलाई केही समय विदा दिनु बुद्धिमानी ठहरिन्छ। यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ।
९ देशका नागरिकलाई मात्र आगमनमा प्रतिबन्ध किन ?
कोरोना भाइरसको प्रकोप विश्वका १२४ देशमा फैलिएको छ। तर नेपाल सरकारले ९ देशका नागरिकलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस हिसाबले ११५ देशका नागरिक सजिलै नेपालमा प्रवेश गर्न पाउने छन्। ११५ देशका नागरिक नेपाल प्रवेश गर्दा के सबै कोरोना भाइरस नलागेका व्यक्ति हुन्छन् ? यो बारेमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेका ११५ देशका नागरिक नेपाल प्रवेश गर्दा ती व्यक्तिबाट नेपाली नागरिक कति सुरक्षित होलान्? त्यो सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै औषधि र खोप नबनिसकेका कारण यसबाट बच्नु एउटा मात्रै उपाय हो सावधानी । तर सरकारले विदेशी नागरिकलाई थर्मल स्क्यानको भरमा मात्रै खुलेआम प्रवेश गर्न कति खतरनाक होला त्यो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। अन्य देशले कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध लड्न पूरै शक्ति खर्च गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले सावधानी पनि अप्नाउन नसक्नु निकै लज्जास्पद मानिन्छ।
खुल्ला सीमा नाका नरहेको नेपालमा हेल्थ डेक्स खडा गरेर ज्वरो नापेकै भरमा विदेशीलाई नेपाल छिर्न दिनु कम खतरनाक छैन्। अझ डेक्समा तैनाथ गरेका कर्मचारी पनि कोरोनाको त्रासले भागेका खबर आइरहेका छन्। कर्मचारी नभएका डेक्स स्थापना मात्रै कोरोना भाइरस नियन्त्रणको भरपर्दो उपाय पक्कै होइन्। साच्चिकै नेपालले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सावधानी अप्नाउने हो भने सबै देशका नागरिकको आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ।
सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सभा सम्मेलनमा प्रतिबन्ध
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले केही समय सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सभा सम्मेलनमा रोक लगाउनु पर्दछ। धेरै भिडभाड हुने यी स्थानमा नागरिकलाई जान नदिनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनसक्छ। यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्ने भएका कारण यी स्थानमा रहेका नागरिक सुरक्षित पक्कै हुँदैनन्। रोग लाग्नु भन्दा लाग्नै नदिनु उत्तम हुने भएका कारण नेपालमा अझै देखिएको छैन् भनेर खुलेआम भिडभाड तथा सभा सम्मेलनमा नागरिकलाई जान दिनु खतराक हुन सक्छ। यसतर्फ सरकारले छिटो भन्दा छिटो कडा कदम चाल्न आवश्यक छ। सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रम र सार्वजनिक स्थानमा अनावश्यक रुपमा ननिस्कन जनतालाई अपिल भने गरेको छ । तर ६ सय एक जना सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भने जारी छ। यसर्थ सरकारले सर्वप्रथम जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संसद् बैठक तत्काल बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउन आवश्यक छ।